गर्भवती महिलाकाे भाेजनमा आवश्यक यी खानेकुराहरू – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २३ असार सोमबार १२:२८
गर्भवती महिलाकाे भाेजनमा आवश्यक यी खानेकुराहरू
एजेन्सी, काठमाडौं। गर्भवती महिलाले खाने सन्तुलित आहारले स्वयं महिला र गर्भमा रहेको बच्चालाई फाइदा पुर्याउँछ। गर्भवती महिलाको पेटमा भएको बच्चाले आमाले खाएको खाना अनुसार पौष्टिकता प्राप्त गर्ने हुँदा गर्भवती महिलाले आहार बिहारमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
गर्भवती महिलाले खाने कुरामा निकै ध्यान दिनुपर्छ । आफु र आफ्नो पेटमा बढीरहेको बच्चाको लागि निम्न खानेकुरा खानुपर्छ ।
सखरखण्ड भिटामिन सी, फोलिक एसिड र फाइबरको मुख्य स्रोत हो । यसले क्यारोटेनोइड्स तत्वबाट सुन्तला रंग प्राप्त गर्दछ भने यो शरीरमा भिटामिन ‘ए’मा परिवर्तन हुन्छ ।
गेडागुडी फाइबरको राम्रो स्रोत भएकाले यसले गर्भावस्थामा निम्तने विभिन्न समस्या कब्जियत र हेमोरोइड्सबाट पनि रोकथाम गर्छ । यसमा प्रोटिनसहित आइरन, फोलिक एसिड, पोटासियम, म्याग्नेसियम र आवश्यक फ्याटी एसिडको राम्रो स्रोत हो ।
गाई तथा भैंसीको दुधबाट बनेको दहीमा प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स र क्याल्सियम पाइन्छ । दहीमा पाइने क्याल्सियमले हड्डी मजबूत पार्नुका साथै शिशुको स्वस्थ हड्डीको बिकास गर्छ ।
प्रोटिनको राम्रो स्रोतको रुपमा अण्डालाई मानिन्छ । प्रोटिनले कोषहरु निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । गर्भवती महिलाले अण्डा खानु निकै राम्रो मानिन्छ । यसमा कोलिनलगायतका भिटामिन र खनिज तत्वहरु पाइन्छ । कोलिनले बच्चाको दिमाग र स्पाइनल कर्ड राम्ररी विकास गर्न सघाउँछ ।
प्रोटिनको मुख्य स्रोतको रुपमा बोसोरहित मासुलाई पनि लिइन्छ । बोसो नभएका मासुमा स्पाइनल कर्ड मजबूत बनाउन उपयोगी मानिने कोलिन पाइन्छ ।
फलफूल तथा तरकारी
हरियो, रातो, सुन्तला, पहेंलो तथा बैजनी रंगका फलफूल सेवनले शिशुले विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त गर्छ । हरेक रंगको फलफूलमा अलग खालको भिटामिन र खनिज तत्व पाइन्छ ।
किन झर्छ पुरुषको कपाल महिलाको भन्दा बढी ?
घामले छाला डढाएको छ ? काँक्रो बन्छ उपयोगी !
जीवनशैली: यी खानेकुरा खादा जसले आँखालाई तेजिलो बनाउछ
जीवनशैली: कालो ओठ सुन्दर बनाउन यसो गरौँ
ओ माइ गड ! उफ् तरकारीको भाउ ! कसरी छाक टार्ने ?
PREVIOUS Previous post: खडेरीले अन्नबाली सखाप, किसानलाई बीउको चिन्ता
NEXT Next post: वैदेशिक राेजगारीबाट बिदामा आएकाबेला मृत्यु भए पनि राहत
शालिकराम – रवि प्रकरणमा बोलिन् रेणु, दिइन् यस्तो प्रतिक्रिया 3,847 views
भोलि १० बजेपछि रबि लामिछाने छुट्दै ! वकिलले भने ‘गल्ति सालिकरामकै छ’ 3,687 views
रबि रियल हिरो हो भन्दै नायक निखिल उप्रेती गार्जिय 2,630 views